Varimi Votengesa Chibage neMutengo Uri Pasi
Varimi vachangokohwa chibage vanonzi vari kutengesera vane mari pane kumirira GMB
Varimi vechibage vakawanda mumaruwa vanonzi vari kumanikidzwa kutengesa chibage chavo nemutengo uri pasi kwazvo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi.
Mumwe mugari wekuUzumba asina kuda kudomwa nezita anoti kunyange hazvo vari kufamba vachitenga chibage ava vari kubhadhara mari iri pasi patani zvichienzaniswa nekuGrain Marketing Board, GMB, vari kumhanyirwa nekuti vari kubhadhara ipapo, pane kuti varimi vamirire GMB, iyo inonzi inozoisa mari kubhanga remurimi.
Murimi uyu anoti chiri kuvamanikidza kutengesa nemutengo uri pasi inyaya yekuti vanenge vaine zvinetswa zvinoda mari nekukasika, kwete kumirira kuti GMB igozoisa mari kubhanga, wozoenda kubhanga kwacho wotadza kutora mari yacho futi.
Vari kutenga chibage ava vanonzi vari kutenga nemitengo iri pakati pezana nemakumi mana emadhora patani kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu.
Asi murimi akaendesa chibage chake kuGMB anonzi anotengerwa nemutengo uri pamusoro kwazvo wemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe patani.
Vari kutenga chibage ava vanonzi vanozotengesawo chibage ichi kuGMB kana kune vanogaya upfu nemutengo uri pamusoro kwazvo.
Hurumende yakadzikawo mutemo unorambidza varimi kutengesa chibage chavo kune mimwe misika isiri GMB, senzira yekuti varimi vakabatsirwa nechirongwa cheCommand Agriculture vasanzvenge vachitengesa kunze.
Asi nekuda kwenhoroondo yeGMB yekusabhadhara nenguva, uyewo kunetsa kuri kuita mari munyika, vamwe varimi vanonzi vari kusarudza kutengesa chibage chavo nemutengo uri pasi vachibhadharwa ipapo, pane kumirira kwenguva yausingazive.
Hurumende yakazivisa kuti rwendo rwuno GMB inenge ichibhadhara varimi nekukasika kuburikidza nekuisa mari kumabhanga avo, uye ine mari inokwana kutenga matani miriyoni imwe nwmazana matatu ezviuru echibage.
Munyori anoona nezvekurima mubato reMDC T, VaValentine Ziswa, vanoti nekuda kwekunetsa kuri kuita mari munyika, varimi havana imwe nzira kunze kwekutambira mitengo iri pasi iyi.
VaZiswa vanoti havatambiriwo zvakare hurongwa hwehurumende hwekumanikidza varimi kutengesa chibage chavo kuGMB chete, vachiti murimi anofanirwa kusununguka kutengesera zvirimwa zvake chero waanoda.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kanawo kune avo vari kutenga chibage nemari iri pasi.